Ixesha kunye nabahlobo 24
Inyaniso enye eqinisekileyo ayinakuqondakaliswa okanye ibonakaliswe kwingqondo yomntu, kwaye nengqondo yomntu ayinakuqonda ubungqina obunjalo okanye umboniso ayinakwenzeka ukuba ibunike, nangaphandle kwemithetho, umbutho, kunye nomsebenzi wendalo ungangqinwa ukuba usisidenge. inyosi, okanye ngaphezulu kwe-tadpole inokuqonda ukwakhiwa kunye nokusebenza kwendawo leyo. Kodwa nangona ingqondo yomntu ingayiqondi enye iNyaniso kwi-abstract, kunokwenzeka ukuqonda into yinyani ephathelele kuyo nayiphi na into okanye ingxaki kwindalo ebonisiweyo. Inyaniso yinto njengokuba injalo. Kuyenzeka ukuba ingqondo yomntu iqeqeshelwe kwaye ikhuliswe ukuze yazi nantoni na njengoko injalo. Kukho amanqanaba amathathu okanye amanqanaba ekufuneka ingqondo yomntu idlule kuwo, ngaphambi kokuba ayazi into njengoko injalo. Isimo sokuqala kukungazi, okanye ubumnyama; owesibini uluvo, okanye ukholo; Owesithathu lulwazi, okanye luyinyaniso.
Ukungazi yimeko yobumnyama bengqondo apho ingqondo inokuthi ibubone into ethile, kodwa ibe ingakwazi ukuyiqonda. Xa ngokungazi ingqondo ihamba kwaye ilawulwa ziimvakalelo. Imizwa ilifu, ibala kwaye idida ingqondo ukuba ingqondo ayikwazi ukwahlula phakathi kwelifu lokungazi nento njengoko injalo. Ingqondo ihlala ingenalwazi ngelixa ilawulwa, ikhokelwe kwaye ikhokelwe ziimvakalelo. Ukuphuma ebumnyameni bokungazi, ingqondo kufuneka izikhathaze ngokwayo ngokuqonda izinto, ngokwahlukileyo kwiimvakalelo zezinto. Xa ingqondo izama ukuqonda into, njengokwahlulahlula imvakalelo yento, kufuneka icinge. Ukucinga kubangela ukuba ingqondo idlule kwimeko yokungazi bumnyama uye kwilizwe lokuzimisela. Imeko yoluvo yile yokuba ingqondo ivakalelwa yinto kwaye izame ukufumanisa ukuba yintoni. Xa ingqondo izixhalabisa ngayo nayiphi na into okanye ingxaki iqala izahlulahlula-hlula njengombhali wento ebichaphazela yona. Emva koko iqala ukuba nezimvo malunga nezinto. Ezi mbono azange ziyikhathaze ngelixa yaneliswa yimeko yokungazi, nangaphezu kokuba umntu ovilapha ngokwengqondo okanye onengqondo yokuzibhokoxa uya kuzixakekisa ngezimvo eziphathelele kwizinto ezingasebenziyo kwiimvakalelo. Kodwa baya kuba nemibono malunga nezinto ezithandekayo. Umbono kukwimeko apho ingqondo ingayiboni ngokucacileyo inyani, okanye into njengoko injalo, eyahlukileyo kwizithamsanqa, okanye izinto njengoko zibonakala zinjalo. Uluvo lomntu lubumba iinkolelo zakhe. Iinkolelo zakhe ziziphumo zezimvo zakhe. Umbono lilizwe eliphakathi phakathi kobumnyama nokukhanya. Lihlabathi apho kubonakala khona iimvakalelo kunye nokutshintsha kwezinto zinokukhanya kunye nezithunzi kunye nembonakalo yezinto ezibonakalayo. Kule meko yoluvo ingqondo ayinakukwazi okanye ayihlukanisi isithunzi kwinto eyiphosileyo, kwaye ayikwazi ukubona ukukhanya njengokwahlukileyo kwisithunzi okanye kwinto. Ukuphuma kwimeko yoluvo, ingqondo kufuneka izame ukuqonda umahluko phakathi kokukhanya, into, kunye nembonakalo okanye isithunzi sayo. Xa ingqondo izama ngolu hlobo iqala ukwahlula phakathi kwembono elungileyo nezimvo ezingalunganga. Uluvo olufanelekileyo lukwazi kwengqondo yokuthatha isigqibo ngumahluko phakathi kwento kunye nokubonisa kunye nesithunzi, okanye ukubona into njengoko injalo. Uluvo olungalunganga yimpazamo yokuboniswa okanye isithunzi sento yento ngokwayo. Ngelixa ukwimeko yoluvo, ingqondo ayikuboni ukukhanya njengokwahlukileyo kwimbono elungileyo nezingalunganga, okanye izinto ezahlukileyo kumbonakaliso nakwisithunzi. Ukuze ube neembono ezichanekileyo, umntu kufuneka akhulule ingqondo ekubandlululeni nakwimpembelelo yeemvakalelo. Izinzwa ziba umbala okanye ziphembelela ingqondo ukuba ivelise ucalucalulo, kwaye apho umkhethe kungekho luvo lufanelekileyo. Ukucinga kunye noqeqesho lwengqondo yokucinga luyimfuneko ekwenzeni izimvo ezifanelekileyo. Xa ingqondo yenze umbono olungileyo kwaye isala ukuvumela iimvakalelo ukuba ziphembelele okanye zithambise ingqondo ngokuchasene nembono elungileyo, kwaye zibambe ezo zimvo zilungileyo, akunamsebenzi nokuba zichasene nesikhundla somntu okanye umdla wakhe okanye isihlobo, kunye bambelela kuluvo olufanelekileyo ngaphambili kwaye ukhetha konke okunye, ngoko ingqondo iya kuthi ngeli xesha idlulayo kwimeko yolwazi. Ingqondo ayiyi kuba nombono wento ethile okanye iphanjaniswe kukuphikisana nezinye izimvo, kodwa iya kwazi ukuba loo nto injengoko injalo. Umntu udlula kwimeko yeembono okanye zeenkolelo, kwaye aye kwimeko yolwazi okanye ukukhanya, ngokubambelela kwinto ayaziyo ukuba iyinyani akhetha konke okunye.
Ingqondo ifunda ukwazi inyani yayo nayiphi na into ngokubhekisele kuyo malunga nento leyo. Kwimeko yolwazi, emva kokuba ifunde ukucinga kwaye ikwazile ukufikelela kwizimvo ezilungileyo ngenkululeko yokubandlulula nangokuqhubeka ucinga, ingqondo ibona nayiphi na into njengoko injalo kwaye iyazi ukuba injengoko injalo ngokukhanya, Kukukhanya kolwazi. Ngelixa ekwimeko yokungazi ibingakwazi ukubona, kwaye ngelixesha izimvo zingakuboni ukukhanya, kodwa ngoku zikwimeko yolwazi ingqondo ibona ukukhanya, njengoko yahluke kwinto kunye nembonakalo yayo kunye namathunzi . Olu lukhanyo lolwazi luthetha ukuba inyani yento iyaziwa, ukuba nayiphi na into iyaziwa ukuba injengoko injalo kwaye ayisiyiyo njengoko kubonakala ngathi ilawulwa kukungazi okanye iphazanyiswa zizimvo. Olu khanyiso lolwazi lokwenyani aluyi kuba yimpazamo nakwezinye izibane okanye ukukhanya oku kwaziwa ngengqondo ngokungazi okanye umbono. Ukukhanya kolwazi kukodwa kungubungqina obungaphaya kombuzo. Xa oku kubonakala, kungenxa yokuba ukucinga kugqityiwe ngolwazi, njengaxa umntu eyazi into engasayi kuqhubela kwinkqubo etyhafisayo yokuqiqa ngaloo nto sele eqiqa ngayo kwaye ngoku uyazi.
Ukuba umntu ungena kwigumbi elimnyama, uve indlela yakhe malunga negumbi kwaye unokukhubeka kwizinto ezilapho, aze azilimaze kwifanitshala kunye nodonga, okanye angqubane nabanye abashukumayo ngaphandle kwegumbi. Le yimeko yokungazi uhlala kuyo. Emva kokuba ehambile malunga negumbi amehlo akhe aqhelene nobumnyama, kwaye ngokuzama uyakwazi ukwahlula umda wento kunye nezinto ezihamba egumbini. Oku kufana nokudlula kwisimo sokungazi nto uye kwizimo zoluvo apho umntu athe wakwazi ukwahlula into enye ngokungafaniyo kwenye into nokuqonda ukuba angangqubani njani namanye amanani ashukumayo. Masicinge ukuba lo mntu ukweli lizwe ngoku ucinga ngokukhanya okwangoku kwaye wakufihla malunga nomntu wakhe, kwaye masicinge ukuba ngoku uyakhupha ukukhanya kwaye akhanyise ngegumbi. Ngokuyikhanyisa kwigumbi alixabanisi kungekuphela yena kodwa kodwa iyabhidisa kwaye icaphukise amanye amanani ashukumisayo kwigumbi. Oku kufana nendoda izama ukubona izinto njengoko zisahluke kwinto ebonakalayo kuye. Njengoko ekhanyisa isibane sakhe izinto zibonakala zahlukile kunangaphambili kwaye ukukhanya kuqaqamba okanye kudidanisa umbono wakhe, njengombono womntu udideka ziimvo ezingqubanayo naye nabanye. Kodwa njengoko ejonga ngononophelo into ukukhanya kwakhe kuphumle kuyo kwaye kungaphazanyiswa okanye kudidekile ngamanye amakhandlela amanye amanani anokuthi ngoku akhanye, afunde ukubona nayiphi na into njengoko injalo, aze afunde ngokuqhubeka nokuvavanya izinto, uyibona njani na into esegumbini. Ngoku masicinge ukuba uyakwazi ngokuvavanya izinto kunye nesicwangciso segumbi ukufumana indawo evulekileyo yegumbi elivaliweyo. Ngokuqhubeka kwemizamo uyakwazi ukususa oko kuthintela ukuvula kwaye xa esenza ukukhanya etyhutyha egumbini aze enze kubonakale zonke izinto. Ukuba akumbonwanga ngumkhukula wesibane esikhanyayo kwaye angaphindi avale ukuvulwa ngenxa yokukhanya okungena ngaphakathi kwaye aqaqambe ngamehlo, engaqhelananga nokukhanya, ngokuthe ngcembe uya kubona zonke izinto ezisegumbini ngaphandle kwenkqubo ehamba kancinci ngaphezulu kwesinye ngokwahlukileyo ngokukhanya kwakhe. Ukukhanya okugcwala igumbi kunjengokukhanya kolwazi. Ukukhanya kolwazi kwenza kwazeke zonke izinto njengoko zinjalo kwaye kungokuKhanya into nganye eyaziwayo ukuba injengoko injalo.